Soo -saareyaasha Alaabada - Shirkadaha Alaabada Shiinaha & Warshadda
Jaranjarada Beam Double
Mono Beam Jaranjarada
Tareenka Casriga ah
Muraayada Muraayada Caadiga ah
Wareegga Muraayadda Spigot
Muraayada Boostada Muraayadda
Aluminium Muraayadda Muraayadda
U Channel Railing Base
Taayirada Birta Dhaqanka ee Dhaqanka
Daaqadaha Birta Wacan & Albaabada
Daaqadaha Birta Faransiiska & Albaabada
Albaabka Birta Weyn
Daaqadaha Birta & Albaabada
Daaqadaha Aluminium & Albaabada
Daaqadaha Go'an ee Aluminium
Aluminium Daaqadaha Laba-laab & Albaabada
Daaqadaha Albaabada Albaabada Albaabada & Albaabada
Daaqadaha Aluminium Daaqadaha & Albaabada
ACE daaqadaha aluminiumka iyo albaabada waxsoosaarka alaabada oo ay ku jiraan daaqadda shiraaca, daaqadda laba -laaban, daaqadda daaqadda, daaqadda laalaabka, daaqadda isku -dhejiska, albaabka dhejiska ah, albaabka muraayadda, albaabka isku laabma, albaabka simbiriirixa ah iyo derbiga daaqadda iwm waxay bixisaa noocyo kala duwan oo aad u fiican, qiime dhab ah iyo talo xirfadeed.
Degaanka Villa Garden ee Raaxada Wadada Wayn Birta Albaabka Weyn
Guryo badan oo villa ah, irdaha birta lagu sameeyay ayaa ah qurxinta wejiga ugu moodada badan, oo leh taabasho farshaxan. Waxaan macaamiisha badan u samaynay qurxinta albaabka birta. Waxay badanaa ku qurxiyaan jardiinooyinkooda ama hoteelladooda albaabo bir ah, taas oo ka dhigaysa mid dhadhankeedu aad u badan yahay.
Bixinta adeeg loo habeeyay si loo dabaqo shuruudaha macmiil kasta, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u gaarno qanacsanaanta macaamilka 100%.
Qiimo Macquul ah Daaqadaha Birta Wanaagsan ee Birta ah & Albaabada
Maxaa Daaqadda Birta & Albaabka Loo Xardhay?
Kaarboonka hooseeyaa wuxuu ka dhigayaa birta birta ah mid waarta oo ku kordhin karta qiimaha gurigaaga. Daaqadaha birta ah iyo albaabada ayaa loo isticmaali karaa albaabka laga soo galo bannaanka guriga, albaabka qolka qubeyska, villa ama guri kale oo ganacsi.
Birta qalalan waxay u adkeysan kartaa xaaladaha cimilada ee adag iyada oo aan waxyeello soo gaarin waxayna bixisaa badbaado aad u badan maxaa yeelay suurtagal ma aha in la jabo.
Waxa kale oo uu u leexi karaa qaab ahaan sababtuna tahay taabashada duugga iyo jeexitaanka. Sababtoo ah cimri dhererkiisa waxay u adkaysataa miridhku.
Albaabadani uma baahna dayactir iyo midabka rinjiga sidoo kale waa raagaya sababta oo ah daaweynta dusha rinjiga budo-dahaarka leh.
In kasta oo birta la farsameeyay ay tahay mid aad qaali u ah marka la barbar dhigo qalabka kale, laakiin haddana waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo adiga kuu dooranaya.
Naqshad Fudud oo Birta Farshaxanka Farshaxanka Daaqadaha Birta & Albaabada
Sii daa fikradahaaga iyo hal -abuurkaaga oo leh xorriyad aan xad lahayn. Naqshadeynta, birtu waxay bixisaa ballaarinta ballaarinta ugu weyn ee suurtogalka ah oo leh qiimayaasha walaaca ee habboon.
Astaamaha birta aadka u caatada ah oo leh ballacyada ugu sarreeya ayaa u oggolaanaya hufnaan, abuurista goobo nololeed oo iftiin leh iyadoo la siinayo heerkulka qolka raaxada leh.
Kala -duwanaanshaha aan dhammaadka lahayn ee birta micnaheedu waa in loo adeegsan karo qaab dhismeedka dhaqanka iyo kan casriga ah - bannaanka ama gudaha dhismaha.
Aragtida soo jiidashada leh ee birta sida maaddad ayaa suurtogal ka dhigaysa in la abuuro kala duwanaansho laga soo bilaabo qaabab xarrago leh iyo kuwo qadiimi ah ilaa kuwo casri ah oo casri ah.
Taayirada Birta ee Dhaqanka ee Caadiga ah ee Balkoonka ama Jaranjarada
1. Adag, adkaysi leh, isku xidhan, habaysan.
2. Quruxda dabiiciga ah, qaro weyn, fudud oo cad.
3. Waxay leedahay baaxad aad u fiican, waxayna abuuri kartaa qaybo kala duwan oo bir ah iyo xayndaab ku salaysan shuruudaha macmiilka.
4. Rakibaadda fudud, oo aan ku xaddidnayn dabar-goynta dhulka, oo ku habboon korsashada aagga ballaaran.
5. Qiimuhu waa mid la awoodi karo.
Aluminium Post Handrail Powder dahaarka leh Balustrade System
Alwaaxa aluminiumka ah ee balcony guardrail waa fududahay in la rakibo, si sahlan loo farsameeyo, badeecaduna waa iftiin.
Dabaqa balakoonka Aluminiumku wuxuu leeyahay xoog sare, dabacsanaan xoog leh, iyo iska caabin daxalka oo wanaagsan.
Marka la barbardhigo agabyada kale ee dhaqameed, ilaalada balakoonka aluminiumka ah waxay iska caabin karaan saamaynta weyn iyo xiisadda iyadoo leh dabacsanaan fiican.
Terrace Aluminum Frameless U Channel Base Glass Railing
Aluminium Base Shoe Glass Glass Railing/fireless channel frame frame/aluminium balustrade channel waa sagxadda dhajinta dhalada kanaalka galaaska, sidoo kale waxaa loo heli karaa kor u qaadista dhinaca darbiga.
6063-T5 Qalabka Aluminium oo leh iska caabin daxal oo aad u fiican oo loogu talagalay isticmaalka gudaha iyo dibaddaba. Waxaa loo dhammeeyaa sida midabka anodized, midabada dahaarka budada ah iyo hadhuudhka naqshado badan oo qurxin ah.
Decking ahama Steel Baluster Wire Cable Railing
Iyada oo leh naqshad casri ah iyo qiimayaal hooseeya, biraha birta birta ayaa ah beddelka ugu weyn ee lagu xirayo sagxadaha iyo jaranjarooyinka. Waxaan u isticmaalnaa birta birta ah sida alaab ceeriin ah si aan si sax ah u soo saarno qaybaha, sidaa darteed xitaa qalabka waa daxalka u adkaysta. Silig waara waa xal adag oo si badbaado leh u ilaalin kara sagxaddaada iyo jaranjarooyinkaaga. Iibso, hel xigasho ama arag qaar ka mid ah mashaariicda la dhammaystiray!
Nidaamka Taleefanka Birta ee Bir -La'aanta ee Balakoonka
ACE's Stainless Steel Rod Railing wuxuu ku habboon yahay guri kasta oo leh qaabkiisa casriga ah.
Iyada oo la adeegsanayo Ulaha, Rakibaadda waligeed ma sahlana oo qalabkeeduna waa gabi ahaanba bir bir ah si uu uga caawiyo nidaamkan inuu sii noolaado.
Rod Railing sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay deegaannada xeebta aadka u daran, codsiyada qaloocan, iyo sida jaranjarada jaranjarada. Taayirada ulahayagu waxay ka dhigeen nidaamyada taraafikada jiifka kuwa ugu wanaagsan ee ay weligood ahaayeen.
Qiimeynta ugu saraysa ee ahama Steel Post Glass Balustrade
Nidaamka taayirada dhalada dhalada ah wuxuu ka kooban yahay biraha aan birta lahayn/dhejiska biraha iyo dhalooyinka galaaska ah. Clip kasta waxaa laga sameeyaa 304/316/2205 birta aan lahayn. Waxay ka qabataa muraayadaha dhalooyinka labada dhinacba iyadoo adeegsanaysa suufka caagga ah ee u dhexeeya taarikada birta.
Isticmaal clips-yada oo leh galaas caadi ah, ama ku xafid dhalada horay loo qoday oo leh bool si xoog dheeraad ah loo yeesho.
Muraayad Dabaasha Barkadda Dabeysha leh ee Dabaasha Spigot Glass Railing
Railing Glass Railing waa nidaam meesha muraayadaha muraayadaha lagu hubiyo dhalooyin dhalooyinka lagu dhejiyo dhejiska ama marmarka qaarkood taallada ama kabaha. Nidaamkani waa mid aad u fudud oo u wanaagsan raadinta barkadda iyo balakoonka.
Muraayadda Muraayadda: Darajada Stainless steel Duplex 2205, 304/316 fasalka ayaa sidoo kale loo heli karaa xulasho.Duplex 2205 oo leh karti ka-hortagga daxalka. Ikhtiyaarka dusha sare ee muraayadda: Muraayadda Muraayadda ee Polish/Satin-Finished/Nickel Buraashday. Looma baahna godad muraayadaha dhalooyinka ah. Waxay leedahay qaab afargeesle ah oo wareegsan.
Muraayadda Muraayadda: 12mm (1/2 inji) galaas nabdoon oo cadcad oo leh AS/NZS 2208, CE iyo shahaadada SGCC. Dhumucda kale sidoo kale waa la arki karaa.
Ku rakiban: buurta dabaqa, buurta dhinaceeda iyo daloolinta asaasiga ah
Waxaad u baahan doontaa inaad u isticmaasho ugu yaraan laba talon 4 -tii guddi galaas kasta. Mid kastaa wuxuu culeyskiisu yahay 2kgs wuxuuna cabbiraa 160-180mm xagga hoose ilaa sare.
Ahama Steel Wall Wall Mount Round Square Square Glass hagaajin Balustrade
Taayirada dhalada ee adag waa nidaam meesha muraayadaha muraayadaha lagu hubiyo istaag (wareegyada/ dhululubada birta aan birta lahayn). Muraayadu waxay leedahay daloollo hore loo qoday, waa la simay, oo meelaha la isku hayaa waxay ku sugaan guddida wejiga toosan ee jaranjarada iyo nidaamka dabaqa. Kani wuxuu noqon karaa nidaam tareen oo aan lahayn oo leh qaddar yar oo qalab muuqaal ah. Xusuusnow: habka dhejinta awgeed, go'aan ah in la isticmaalo nidaamkan ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo marxaladda qaabaynta maadaama ay u baahan tahay taageero ku filan si ay u taageerto galaaska.
La xiriir internetka
Rm208, Fl 2, #5 Bldg, NO.1980 Beerta Warshadaha Sayniska iyo Dhaqanka, beesha Fukang, degmada Longhua, Shenzhen